အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်လက်တွေ့တွေ့တွေ့မှုများ (၂၀၀၈) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2008) နဲ့လက်တွေ့တွေ့ဆုံ
comments: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသည်သူ၏အထီးလူနာအချို့ကိုအပေါ်ရှိခြင်းခဲ့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိဖွစျလာသူတစ်ဦးစိတ်ရောဂါကရေးသားလေးလက်တွေ့ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူဘက်စုံစက္ကူ, ။ အဆိုပါမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့အမှု #1 တစ်နည်းနည်းကိုအောက်တွင်ပွားနေကြသည်။ အဆိုပါကိစ္စတွင်အစွန်းရောက် porn နှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်သူတစ်ဦး 31 နှစ်အရွယ်လူကိုဖော်ပြသည်။ ဤသည်သည်းခံစိတ်, တင်းမာမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှဦးဆောင် porn အသုံးပြုမှုကိုပုံဖော်ဖို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။
Kalman, သောမတ်စ် P.
Weill အတှကျ-ကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်နယူးယောက်စီးတီး, နယူးယော့, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အဆိုပါ Psychoanalysis ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့် Dynamic စိတ်ရောဂါကုသမှု 36 ၏ဂျာနယ်မရှိ။4(2008): 593-618 ။
ညစ်ညမ်းခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပုံဖော်တင်ဆက်ခြင်း, ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်အတွေ့အကြုံများပါဝင်ပတ်သက်နေသူတိုင်းနားလည်လျှင်, ဖြစ်ကောင်းလူ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်နှိုက်သကဲ့သို့အဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအထူးထူးအပြားပြားနည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှုဆက်စပ်, အင်တာနက်အသက်အရွယ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းစူးစမ်းဖို့ access ကို, တတ်နိုင်နှင့်ယူဆအမည်မဖော်လွယ်ကူခြင်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအတူမော်ကွန်းအချိုးအစားရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသက်မွေးဝမ်းအတွင်းသိသိသာသာသုတေသနယေဘုယျညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်တည်ရှိ; သို့သော်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာစပေ့၏လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသာဆန်းစစ်ခံရဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါနှင့် psychoanalytic စာပေနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောသမိုင်းနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်အပြင်, လေးအသေးစိတ်လက်တွေ့ Vignette psychotherapists ကျင့်သုံးမှပေးအပ်လျက်ရှိသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများအမျိုးအစားများသရုပျဖျောဖို့တင်ပြနေကြပါတယ်။
၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင်အထွေထွေ (အင်တာနက်) မဟုတ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပညာရှင်များအကြားသူတို့၏တရားဝင်မှုနှင့်နည်းစနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုအချို့ရှိသော်လည်းဤလေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသောနိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ဤပညာသင်ဆု၏ကိုယ်စားလှယ်မှာသုတေသီများဖြစ်သည့် Dolf Zillman နှင့် Jennings Bryant တို့၏လူသိများသောလေ့လာမှုများဖြစ်သည်။ အဘယ်သူ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည် (Zillman & Bryant, 1980; Zillman & Bryant, 1990) ။ သူတို့၏အလုပ်တွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် - (၁) အမျိုးသမီးများအပေါ်ကြောက်လန့်ခြင်းတိုးပွားခြင်း၊ (၂) အဓမ္မပြုကျင့်မှု၊ (1982) လိင်နှင့်ပတ်သက်။ ပုံပျက်အမြင်များ; (၄) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများကိုပိုမိုသိသာထင်ရှားစေရန် (အရှိန်အဟုန်နှင့်စွဲလမ်းမှု) တိုးပွားလာခြင်း၊ (1988) monogamy ၏အရေးပါမှုကိုတန်ဖိုး။ နှင့် (1) မိတ်ဖက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, ချစ်ခင်နှင့်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူကျေနပ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။
ယေဘုယျညစ်ညမ်းကြောင့်နှင့် ပတ်သက်. အငြင်းပွားမှုများ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်တစ်ခုလုံးကိုပညာသင်ဆုတစ်စေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ် Manning (2006) ကကောက်ယူခဲ့ပြီးဒီနေရာကိုထပ်လောင်းပေမယ့်သူမ၏အကဲဖြတ်အောက်ပါအတိုင်းမည်မဟုတ်ပါ:
အချုပ်အားဖြင့်သုတေသနပြုချက်အရ [ယေဘုယျ] ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လည်ပတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဆိုးကျိုးရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ meta-analysis [အပါအဝင် Allen က, D'Allesio, & Brezgel, 1995 အပါအဝင်သုတေသန, Oddone-Paolucci, Genius, & Violeto, 2000] ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည် (က) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမယိမ်းယိုင်ခြင်း၊ (ခ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း၊ (ဂ) ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးတွင်အခက်အခဲတွေ့ခြင်း၊ (experien) မုဒိမ်းကျင့်မှုကိုလက်ခံခြင်း၊ (င) အမူအကျင့်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု။ (စ။ ၁၃၇)
စိတ်ပညာ၊ စိတ်ရောဂါကုသမှု၊ လူမှုဗေဒ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျားမလေ့လာမှုနှင့်လူ့လိင်စသည့်စည်းကမ်းများစွာတွင်အင်တာနက်အပြာစာပေ၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ပတ်သက်သောစာပေများစွာရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် cybertechnology နှင့်တစ် ဦး ချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ လူ့အသိုင်းအ ၀ န်းဆက်ဆံရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထင်မြင်ယူဆချက်များရှိသော်လည်းဤပညာသင်ဆုတွင်ရှင်းလင်းသောသဘောတူညီမှုမရရှိခဲ့ပါ။ ရှင်းနေသည်မှာအင်တာနက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်မှုသည်လိင်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှု (ဆိုလိုသည်မှာသန္ဓေတားခြင်း၊ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ၊ ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ခန္ဓာဗေဒ)၊ လူကိုယ်တိုင်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာပါ ၀ င်သည်။ နှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန။ များစွာသောသူတို့အတွက်အင်တာနက်သည်လူတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတ၊ စွမ်းရည်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဘဝကိုကောင်းမွန်စွာတိုးချဲ့စေသည်။ သို့သော်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသည့်အစီရင်ခံစာများကိုတိုး။ ရရှိနေသည်။ ထို့အပြင်ပြsurveနာများရှိသောအတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းများနှင့်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်သန့်ရှင်းသောပျော်စရာမျှသာမက ပို၍ ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအားအထောက်အပံ့ပေးခဲ့သည် (Cooper, Putnam, Planchon & Boies, 1999; Meerkerk, Van de Eijnden, & Garretsen, 2006; Mitchell က, Becker-Blease, & Finkelhor, 2005; Mitchell က, Finkelhor, & Becker-Blease, 2007) ။ အထွေထွေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေကြည့်ရှုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိသို့မဟုတ်အင်တာနက်၏ထူးခြားသော attribute များကကွဲပြားခြားနားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆက်စပ်သောပြcreatedနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိမရှိမသေချာပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည်ယခုတွင်များပြားလာသည်။
ဒါဟာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကဆရာ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်တခြားလိင်-related လှုပ်ရှားမှုများ၏အာရုံကိုမှကြွလာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုခံရဖွယ်ရှိသည်အထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးချင်းများအတွက်ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါသိသာဖြစ်လာနေသည်။ Meerkerk et al အားဖြင့်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု။ (2006) ဝက်ဘ်ဆိုက်များအများဆုံးနီးကပ်စွာ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (CIU) ၏နောက်ဆက်တွဲဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြပေမယ်သာ erotica အသုံးပြုမှုကိုရှင်းလင်းစွာတစ်ဦးတည်းနှစ်ကြားကာလမှာ CIU ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုခန့်မှန်း (ညစ်ညမ်းနှင့်အတူပြောရလျှင်စဉ်းစားဤစာရေးသူအားဖြင့်) ထိုဂိမ်းနှင့် erotica စိတ်ပိုင်းဖြတ် (စ။ 98) ။ Mitchell က et al ခြင်းဖြင့်စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာများ၏နောက်ထပ်မကြာသေးခင်ကစစ်တမ်း။ , (2005) အထွေထွေသုံးရင်, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခြင်း, ဂိမ်းနှင့်အခန်းက္ပ-ကစားအပါအဝင်အင်တာနက်ကိုဆက်စပ်ပြဿနာအတွေ့အကြုံများ၏တကျိပ်တပါးသောအမျိုးအစားများ, ရေးဆွဲပြီး။ 929 အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းလူဦးရေအတွက်, လွှမ်းမိုးသောအများစုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် ပို. မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုပြဿနာမဆိုအခြားအမျိုးအစားထက်အခြားအင်တာနက်-mediated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အခြားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးကြရန်) အကြားဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ခံပါတယ်။ အများစုမှာမကြာသေးမီက, The New York Times အနေနဲ့ဆောင်းပါးတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ Out-of-ထိန်းချုပ်မှုသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (Fackler, 2007) စီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့ဒီဇိုင်းတောင်ကိုရီးယားအင်တာနက်စွဲလမ်း Boot တက်စခန်းများပေါ်ပေါက်လာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း ပတ်သက်. အခွားစာပေ (ဖတ်မြင်ကွင်း) ကိုအသုံးပြုဖို့သူမြား၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတှေ့အကွုံအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့, လက်တွေ့ဖော်ပြချက်လည်းပါဝင်သည်တစ်ပုံမှန်လေ့, ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်းအခြေခံပေါ်မှာညစ်ညမ်း။ : အမှန်စင်စစ်ပေးထားသောဧရိယာထဲမှာပိုပြီး "စနစ်တကျသုတေသနပြု" အတွက်သုတေသီများ '' ပုံမှန်အတိုင်းအယူခံဝင်ဖို့ contradistinction အတွက်အလုပ်ခွင်ထဲမှာတစျအုပျစုစုံစမ်းစစ်ဆေးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်မှတ်ချက်ပြုထားသည်
အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု [ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ] သုံးစွဲသူများ၏အမျိုးမျိုးသော profile များကိုအမျိုးမျိုးသောထူးခြားသောနားလည်မှုအပြင်ထူးခြားသောအမှုတစ်ခုစီ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများ (ဥပမာ၊ သူတို့ဘယ်သွားသွား၊ သူတို့သွားကြသည်နှင့်သူတို့သွားသည့်အချိန်မည်မျှကြာသည်) ဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတယ်။ (အလေးပေးသောသတ္တုတွင်း၊ Cooper၊ Safir & Rosenmann, 2006, p ။ 27)
ပုဂ္ဂလိကပြင်ပလူနာ psychotherapy တွင်တွေ့မြင်လိင်ကွဲအထီးပါဝင်သောအနည်းငယ်လက်တွေ့အခြေအနေတွေယခုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးချင်းရဲ့ဘဝအတွက်သိသာထင်ရှားသော, ပြဿနာအခန်းကဏ္ဍကဘယ်လိုဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားသို့ရာတွင်စာပေအစီရင်ခံအခြားသူတွေနှင့်ကုသနိုင်ရန်ဆက်သွယ်ထားကြောင်းပြဿနာများ၏အမျိုးအစားများကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြသည်။ privacy ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနားလည်သဘောပေါက်တင်ပြနိုင်ပါတယ်အသေးစိတ်ကန့်သတ်နေချိန်တွင်ဤကိစ္စတွင် Vignette စာပေအတွက်ချမ်းသာလက်တွေ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖြေရှင်းမယ်လို့လက်တွေ့ဖော်ပြချက်အမျိုးအစားသည်။ အဆိုပါဖော်ပြချက်နောက်ထပ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များအချို့တို့အပေါ်မှာအသေးစိတ်နှင့်ဤဘာသာရပ်၏တူးဖော်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအချို့သောပြဿနာများထုတ်ဖေါ်။ (ရေးသားသူရဲ့မှတ်စု: ။ ။ အောက်ပါကိစ္စတွင် Vignette တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုမဆိုဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့စိတ်ရှည်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းစေခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများကိုအတိအကျ oc များအတွက် curred နေကြသည်အဖြစ်နေစဉ်စာရေးသူအပြင်ကွဲပြားခြားနားသော, အမည်မသိ psychotherapists အားဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီ core ကိုဆိုက်ကိုဒိုင်းနမစ် variable တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်မိသားစုသမိုင်းနဲ့အကြောင်းအသေးစိတ််၏ပါပြီ။ သမိုင်းပစ္စည်းအချို့မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ )
ရောထွေးစိုးရိမ်စိတ်ပြဿနာများအတွက်သရုပ်ခွဲ psychotherapy အတွက်တစ်ဦးက 31 နှစ်အရွယ်အထီးသူလိင်ကသူ၏လက်ရှိမိတ်ဖက်များကနှိုးဆွဖြစ်လာအခက်အခဲကြုံနေရခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမသည်အကြောင်းကိုအများကြီးဆွေးနွေးပြီးနောက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို, ဖြစ်နိုင်သမျှငုပ်လျှိုးနေပဋိပက္ခများကိုသို့မဟုတ် (ကသူ၏တိုင်ကြားချက်များအတွက်ကျေနပ်ရှင်းပြချက်ရောက်ရှိလာသောမပါဘဲ) ဖိနှိပ်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာသူနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာမယ့်အထူးသဖြင့်စိတ်ကူးယဉ်ပေါ်မှီခိုသောအသေးစိတ်ဖြစ်သည်။ အတန်ငယ်သတိထားသူကသူ့ဖန်စီဖမ်းမိနဲ့သူ့အကြိုက်ဆုံးတွေထဲကဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်း site ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းအတော်ကြာယောက်ျားမိန်းမတို့ပတျသကျကိုတခုတခု "မြင်ကွင်းတစ်ခု" ဖော်ပြခဲ့သည်။ အတော်ကြာအစည်းအဝေးများ၏သင်တန်းကျော်သူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း, မိမိနှစ်လယ်ပိုင်း 20s ကတည်းကရံဖန်ရံခါစေ့စပ်ခဲ့သောအတွက်လှုပ်ရှားမှုသည်သူ၏အသုံးပြုမှုကိုအပေါ်သို့တင်ပြသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, မိမိအသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့လိင်နှိုးဆွဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များပြန်ခေါ်တခုတခုအပေါ်မှာတိုးပွားလာမှီခို၏ရှင်းလင်းသောဖော်ပြချက်ပါဝင်သည်။ သူလည်းသူကလိင်စိတ်နိုးထ၏ကြိုတင်, တပ်မက်လိုချင်သောအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်သည့်အတူအသစ်သောပစ္စည်းတစ်ခုရှာဖှေနေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိအပြီးမဆိုအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းများ၏နှိုးဆွသောသက်ရောက်မှုတစ်ခု "သည်းခံစိတ်" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖော်ပြခဲ့သည်။